नेकपामा नयाँ पुस्ताको सजीव अवसान !- विचार - कान्तिपुर समाचार
अहिले नेकपा निहित स्वार्थ समूहहरूको महासंघजस्तो भएको छ । विचार बनाउने टाउकाहरू अलग, क्रिया–प्रतिक्रिया गर्ने शरीरहरू अलग, गतिशील हुने खुट्टाहरू पनि अलगअलग दिशातिर फर्केका !
मंसिर १४, २०७७ श्याम श्रेष्ठ
डबल नेकपामा अहिले आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला यसरी मञ्चन भइरहेछ, त्यो क्रम चल्दै जाँदा कसैको शरीरमा कुनै लुगा बाँकी रहने छाँटकाँट छैन । पहिले पनि त्यहाँ अस्वस्थ झगडा त हुन्थ्यो तर मिल्ने ठाउँ थोरै बाँकी राखेर राजनीतिक कुस्ती चल्थ्यो ।
यसपालिको द्वन्द्व गुणात्मक तवरले पृथक् देखिन्छ । यति बेला फेरि पछाडि फर्कने पुल नै भत्काएर द्वन्द्वरत दुवै थरी प्रस्तुत भइरहेछन् । दुवै थरीका आरोप–प्रत्यारोपको प्रकृति नियाल्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ, यो पार्टीलाई लामो समय जोडिराख्न सकिन्छ भनेर दुवै थरी शीर्ष नेताहरूले आस मारिसकेका छन् । खालि फुटको कुन हदको दोष अर्को पक्षमाथि कसरी थोपर्न सकिन्छ भनेर हिसाबकिताब चलिरहेको छ ।
यस्तो देखिन्छ, यो पार्टीको फुटको बीउ यसको एकताकालमै रोपिसकिएको थियो । सिद्धान्त, विचार र दह्रिलो राजनीतिक जगमा खडा नभएको पार्टी एकताको महललाई निजी स्वार्थ र अहंकारको टक्करको ससानो झोक्काले समेत गर्ल्यामगुर्लुम ढालिदिन सक्छ । अहिले डबल नेकपामा त्यही परिस्थिति देखा पर्दै छ । आसन्न संसदीय चुनाव जसरी पनि जित्ने उद्देश्यले विचारमा पूर्वपश्चिम फर्केका दुई अध्यक्षले सत्ताको गणितीय बाँडफाँटका आधारमा त्यति बेला हतारहतार पार्टी एकता भएको घोषणा गरे । त्यति बेलाको त्यो असैद्धान्तिक अर्थहीन हतार आज डबल नेकपाको घाँटीमा माछाको काँडा बनेको छ । निल्नु पनि हुँदैन, ओकल्नु पनि हुँदैन !
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी घोषणापत्रबमोजिम भटाभट जनताको मन जित्ने अग्रगामी काम गर्दै लान सकेका भए सम्भवतः अहिले विश्वव्यापी महामारीका बीचमा यसरी राजीनामा माग्ने नैतिक आँट कसैको हुन सक्दैनथ्यो । उनले त्यस्तो गर्न सकेनन् । उनले पद, अवसर र जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गरेर आफ्नै दलभित्रको भिन्न मतलाई सँगसँगै समेटेर लान सकेका भए पनि अहिलेको जस्तो आपसी सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण स्वरूपमा विकसित हुन सक्दैनथ्यो । तर उनको अहंकारी तथा हठी स्वभाव, असमावेशी र असहिष्णु चरित्र अनि बरफजति आफ्नो पक्षलाई, सिन्काजति भिन्न मत पक्षलाई गर्ने नीतिले गर्दा यस्तो पनि हुन सकेन । दोस्रो तहका नेताहरूको क्रियाशीलतामा यसअघि पटक–पटक भएका सहमतिलाई उनले अक्षरशः पालना गरेका भए पनि अहिलेजस्तो विस्फोटक रूपमा यो द्वन्द्व विकसित हुन सम्भव थिएन । तर कुनै पनि सहमति पालना गर्ने उनको स्वभाव नै रहेन । त्यसैले धेरैचोटि थाङ्नामा सुतेका भिन्न मत पक्षका नेताहरूको उनीप्रति कुनै विश्वास नै बाँकी रहेन । समयसमयमा पार्टीको उपल्लो अंगको बैठक राखेर समस्या र असन्तोषलाई त्यहाँ अभिव्यक्त हुन दिइएको भए र त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधिमार्फत बेलैमा सम्बोधन गरिएको भए पनि संकट यो हदसम्म चुलिन पाउँदैनथ्यो । तर म नै पार्टी हुँ र म नै राज्य हुँ भन्ने अहंकार जागेका उनमा लोकतान्त्रिक विधिप्रति कुनै आस्था बाँकी रहेन । अहिले जुन ढंगले नेकपामा फुटको हदसम्म द्वन्द्व चुलिएको छ, त्यो उपर्युक्त कारणहरूको संयुक्त प्रतिफल हो । यो एकै दिनमा चुलिएको द्वन्द्व होइन, धेरै समयपछि समस्या र संकट पाक्दा–पाक्दा मनै फाट्ने स्थितिमा पुगेको मात्र हो ।
अहिले नेकपा निहित स्वार्थ समूहहरूको महासंघजस्तो भएको छ । विचार बनाउने टाउकाहरू अलग, क्रिया–प्रतिक्रिया गर्ने शरीरहरू अलग, गतिशील हुने खट्टाहरू पनि अलगअलग दिशातिर फर्केका तर सत्तास्वार्थको मसिनो धागो माथि टुप्पीमा र पार्टी फुटेर छँदाखाँदाको सरकार पनि जाला, सारा अवसर पनि जाला, पद पनि जाला भन्ने डरको नाम मात्रको डोरीले एउटा–एउटा खुट्टामा बाँधिएको भरमा त्यो पार्टीको एकता मुस्किलले बचेको छ । त्यो मसिनो धागो र डोरी चुँडिनेबित्तिकै पार्टी एकता कुनै पनि क्षण भताभुंग हुने स्थिति छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरू सबैजसोको यतिखेरको मूल प्रवृत्ति पार्टी फुट नै देखिएको छ । परन्तु कार्यकर्ताको मूल प्रवृत्ति भने अझ पनि पार्टी एकताकै पक्षमा देखिन्छ । तथापि यसका दोस्रो र तेसो तहका सारा नेता–कार्यकर्ताहरू यति बेला औधी निरीह र निष्क्रिय देखिएका छन् । माथिको फुटको असर तलसम्म सर्दै छ । यो परिस्थितिमा सर्वशक्तिमान केन्द्रीय समिति सक्रिय भएमा बाहेक डबल नेकपाको पार्टी एकतालाई जोगाउने तागत अरू कसैको छैन । विडम्बना, अध्यक्ष ओली यही केन्द्रीय समितिको बैठक जसरी पनि टार्ने प्रयत्नमा देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली अकारण त्यसो गर्दै छैनन् । उनलाई दुईमध्ये एउटा पद छोड्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचारको मूर्त उदाहरणसहितको जुन आरोपपत्र प्रचण्ड–माधव समूहले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यो यति संगीन छ, त्यसलाई अब त्यो समूहले फिर्ता लियो भने पद र अवसरको भागबन्डासित नैतिकता साटियो भन्ने चर्को आरोप उसमाथि तेर्सिन सक्छ । फिर्ता लिएन र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा तथा संसदीय दलमा दर्ता भयो भने र सत्तारूढ दल वा संसदीय दलको बहुमतले त्यसलाई सही ठहर्‍याएको स्थितिमा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री एक छिन पनि पदमा रहिरहनु मिल्दैन । आफूले पद छोड्नुपर्‍यो भने त्यो पार्टी पनि फुट्ने र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अर्को कोही बस्न नसक्ने पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट जताततैबाट सार्वजनिक भइरहेकै छ । यो जगजाहेर छ, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा प्रचण्ड–माधव समूहको सुस्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गरिन्छ । सायद यही हुनाले प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दल वा पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिको बैठकजस्तो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा जानसमेत अनिच्छुक देखिन्छन् ।
दोस्रो तहका नेताहरू पूरै निष्क्रिय छन् भन्ने होइन । उनीहरू द्वन्द्वरत दुवै पक्षका बीच सुलह गराउन बेलामौकामा थोरै सक्रिय भइरहेकै छन् । पार्टी एकता त हुनुपर्छ तर त्यो सही सिद्धान्त र राजनीतिसहितको हुनुपर्छ भन्नेमा दोस्रो तहका नेताहरूको ध्यान पटक्कै नजानु नेकपाको यति बेलाको दुःखान्त हो । उनीहरू निरपेक्ष पार्टी एकताको दौडमा छन् जुन संसारमा कतै टिकाउ भएको देखिँदैन । समाजवादी सिद्धान्त, संस्कृति र राजनीतिको पूरापूर नोक्सानीमा पार्टी एकता निरपेक्ष रूपमा जसरी पनि बचाउने कुराले नेकपालाई ‘नेअपा’ मा मात्र रूपान्तरित गर्छ । नेअपा अर्थात् नेपाल अवसरवादीहरूको पार्टी ।
थुप्रै यक्षप्रश्न प्रचण्ड–माधवको समूहमाथि पनि खडा नभएका होइनन् । भ्रष्टाचार र विधि/प्रक्रियाको उल्लंघनको जुन आरोप उनीहरूले लगाएका छन्, त्यो आजको घटना होइन । यदि त्यो सत्य हो भने त्यसरी आरोपित व्यक्तिलाई नै पाँच वर्ष निष्कण्टक प्रधानमन्त्री चलाउन दिने निर्णय किन र कसरी हुन सक्यो ? आफ्नो बहुमत रहेको भनिएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक डाकेर बेलैमा त्यसको छिनोफानो गर्ने काम किन भएन ? यसले देखाएको छ, पद र जिम्मेवारीको भागबन्डा मिल्यो भने त अहंभन्दा अहं मुद्दामा त्यो पक्ष पनि चुप बस्ने रहेछ । त्यस पक्षले पनि महामारीको यो समयमा खोजेको मुख्य कुरा पद नै रहेछ । अतः नेकपामा नैतिकता, संस्कृति र सिद्धान्तको अनिकाल एकातिर मात्र देखिँदैन, यो त्यहाँको आम समस्या हो । खालि मात्रा र जोड–कोणको मात्र भिन्नता हो ।
नेकपालाई सिंगो देशमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने एउटा ठूलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई आर्थिक–सामाजिक क्रान्तिले परिपूर्ण बनाएर देशलाई समाजवादतिर डोर्‍याउने एउटा अभूतपूर्व मौका दैलोमै आएको थियो । पहिलो आधा कार्यकालमा देशको वर्गीय आर्थिक संरचना बदल्ने तात्त्विक महत्त्वको काम केही पनि नगरेर, अझ उल्टो–उल्टो काम गरेर नेकपाको सरकारले यो अवसर अनाहकमा गुमाएको छ । बिचौलिया दलाल र भुइँफुट्टा नवधनाढ्य वर्गको दलमा रूपान्तरित भएर अहिले यो पार्टी समाजवाद त टाढा रह्यो, पुँजीवादको समेत नेतृत्व गर्न अक्षम देखिइरहेको छ । आजको दुनियाँमा पुँजीवादले पनि विद्यालय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यलाई राज्यको मुख्य जिम्मेवारी ठान्छ । तर यसले त नाफाखोर निजीलाई सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी लिइदिन खुलेआम आह्वान गरिरहेको छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्री स्वयम्‌को मुखारविन्दबाट ।
सर्वोच्च अदालतले सशक्त हस्तक्षेप नगरेको भए कोरोना महामारीको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारीसमेत यो सरकारले नागरिक स्वयम्लाई घोषित रूपमा सुम्पिसकेको जगजाहेर छ । ‘वामपन्थी सरकार’ को दक्षिण फर्केको नाक धन्न अदालतले जोगाइदियो । चुनावी घोषणापत्र मुताबिक मात्र काम गरेको भए पनि यसको वामपन्थ थोरै बच्थ्यो । तर सरकारले त्यही घोषणापत्रलाई पनि धोबीखोलामा मिल्काएपछि यसको लोकप्रियताको बखान गर्ने आफ्नै सानो भजन मण्डलीसिवाय कोही रहेन । आफ्नै सचिवालय पनि रहेन । यो सरकार सिंहदरबार बदल्नलाई भनेर सत्तामा आएको थियो । परन्तु सिंहदरबारको राज्ययन्त्रको वर्गचरित्र र स्वरूप जस्ताको तस्तै छ, सिंहदरबारको बनीबनाउ राज्ययन्त्र र त्यसको भ्रष्टाचारमुखी वर्गचरित्रअनुकूल यो आफैं रूपान्तरित भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ताजा रिपोर्टअनुसार एसियामै सबैभन्दा भ्रष्ट नेपालको सरकार नै ठहरिएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर उनलाई भ्रष्ट व्यक्तिको प्रतिरक्षामा उत्रने शीर्ष राजनीतिक नेता भनेर इंगित गरिएको छ । यस्तो घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो, जुन ज्यादै लाजमर्दो हो ।
तर पार्टीमा जस्तोसुकै प्रतिगामी र दलाल पुँजीवादी चरित्र छाउँदा पनि दोस्रो र तेस्रो तहका सारा नेता–कार्यकर्ता मौन देखिन्छन् । कुनैकुनै नेता–कार्यकर्ताले थोरै आलोचनात्मक शब्द बोलिहाले पनि उनीहरूले त्यही बेला त्यही परिस्थितिमा त्यही पँधेरोको पानी मजाले खाइरहेको देखिन्छ, जहाँ यी सबै अनुचित घटना निष्कण्टक भइरहेका छन् । कतै सशक्त विरोध वा विद्रोहको प्रवृत्ति देखिँदैन । कतै अर्थपूर्ण आलोचना र टिकाउ फरकमत देखिँदैन । के पद र पैसाको लोभले नै उनीहरूको मुख यसरी थुनिरहेको हो ? अथवा, अहिले पाएको र भविष्यमा पाउन सक्ने अवसर जाने डरले उनीहरूको क्रियाशीलता र जागरुकता मारिरहेको हो ? दुःखसाथ भन्नुपर्छ, राजनीतिक रूपमा डबल नेकपामा दोस्रो तथा नयाँ पुस्ताको सजीव मृत्यु भएसरह छ । किनकि त्यहाँ मसानघाटको शान्ति छाएको छ ।
मृत्यु पनि कहिल्यै सजीव हुन्छ ? जीवन बाँकी रहँदासम्म मृत्यु नै हुँदैन; जब कोही मर्छ, ऊ जीवित रहँदैन । प्राकृतिक जीवनमा यो सत्य हो । तर राजनीति यस्तो क्षेत्र हो जहाँ शरीर कुँजो भएर केही हुँदैनÙ आलोचनात्मकता, क्रियाशीलता र जागरुकताको मृत्यु भयो भने त्यो सामाजिक रूपमा मृत्युभन्दा चर्को हुन्छ । यही हिसाबले नेपाल नामक धरतीको एउटा सानो टुक्रामा डबल नेकपा नामक दलको राजनीतिक जीवनमा सजीव मृत्युको घटना आँखाअगाडि भइरहेछ । त्यो पनि एक जनाको होइन, सिंगै एउटा युवा राजनीतिक पुस्ताको । त्यो पुस्ताको शिक्षा उच्च छ, तर नराम्ररी बाटो बिराएका अगुवाहरूलाई तहमा ल्याउन उसको बुद्धिविवेक कतै प्रयोगमा आएको देखिँदैन । युवाहरूका हातगोडा तगडा छन्, तर पथभ्रष्ट नेताहरूको ढोका ढकढक्याउन ती आवश्यक मात्रामा क्रियाशील भएका देखिँदैनन् ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०९:३६
क्यासलेस सोसाइटीमा जान असम्भव होला तर लेस क्यास सोसाइटीमा हामी चाँडै जान सक्छौं ।
मंसिर १४, २०७७ अनिलकेशरी शाह
अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा बैंकको भूमिका छ । बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको महत्त्व अझ बढी छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ र सेवाहरूको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहमा पुर्‍याएका र डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराएका धेरैभन्दा धेरै सेवासुविधाका कारण बैंक धेरैभन्दा धेरै जनतामा पुगिसकेको छ ।
नगदको सट्टा कारोबार गर्न सकिने डिजिटल माध्यमका थुप्रै सेवाले नेपाल–प्रवेश गरेसँगै यसप्रति बैंकका ग्राहकहरूको चासो बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा बैंकको सेवाका कारण डिजिटल प्लेटफर्म थपिएका छन् भने, कतिपय अवस्थामा ग्राहकको मागका आधारमा बैंकले डिजिटल सेवा दिन थालेको छ । समाज प्रविधिमैत्री बन्दै गएको र मोबाइल फोन हरेक नेपालीको हातमा पुग्दै गएकाले डिजिटल बैंकिङमा व्यापक सहजता आएको छ ।
नेपालमा डिजिटल वा अनलाइन बैंकिङ सन् १९९३ तिर सुरु भएको हो । त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्रमा क्रेडिट कार्डको प्रयोगको सुरुआत भएको थियो । प्रयोगकर्ताका लागि सुरु भएको सेवाको गतिले त्यसको एक दशकमै डिजिटल बैंकिङमा नयाँनयाँ ‘प्रडक्ट’ आएका कारण झन् तीव्रता पायो । तर, नेपालका बैंकमा डिजिटलको अभ्यास त्योभन्दा अलि अघि भएको पाइन्छ । म सम्झन्छु, ३६ वर्षअघि नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल बैंक) नेपालकै पहिलो कम्प्युटराइज्ड बैंक थियो । नेपाल अरब बैंकले त्यति बेला काम सुरु गर्दा कम्प्युटराइज्ड बैंक भनेर ठूलठूला ग्राहकहरू कम्प्युटरहरू हेरौं न भनेरसमेत आउने गरेका थिए ।
त्यो बेलाका बैंकहरूमा ठूलठूला ढड्डा पल्टाएर खातापाता लेख्ने र बनाउने गरिन्थ्यो । भनेपछि, त्यो बेलादेखि नै हालको नबिल बैंक डिजिटलमै थियो । नबिल बैंकले नै पहिलोपटक नेपालमा एटीएम सेवा पनि उपलब्ध गराएको हो । अहिले नबिल बैंकले डिजी बैंक नै स्थापना गरेर डिजिटलको हरेक सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । डिजिटलमा लगानी बढाउनुको प्रमुख उद्देश्य हो– ग्राहकलाई हाम्रा सेवासुविधा छिटोछरितो रूपमा दिनु र सुरक्षामा अब्बल बनाउनु ।
नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङको थालनी सन् २००२ मा भएको हो । सन् २००३ मा भिसा डेबिट कार्ड सेवा र २००४ देखि मोबाइल बैंकिङ सुरु भएको देखिन्छ । तर, एटीएम भए पनि, इन्टरनेटको सुविधा भए पनि, मोबाइल बैंकिङको एप राखे पनि धेरै ग्राहकले परम्परागत बैंकिङ सेवा प्रणाली नै बढी प्रयोग गरिरहेको बैंकहरूको अनुभव छ । धेरै बैंकले डिजिटल बैंकको प्रडक्ट दिने तर प्रयोगविधि नसिकाउने र त्यसको फाइदाबारे पटक–पटक नभनिदिने गर्नाले सेवा लिएर पनि प्रयोगकर्ताहरू अभ्यस्त भएको पाइएन । प्रडक्टहरू ल्याउँदै गर्ने र बिर्सिंदै जाने समस्या धेरै थियो ।
कोभिड–१९ अघि नै डिजिटल बैंकिङका थुप्रै प्रडक्ट थिए । तर, प्रयोगमा थोरै थिए । महामारीयता यसको प्रयोग र डिजिटल बैंकिङको महत्त्वमाथि बढी चर्चा हुन थालेको हो । ग्राहकहरूले ती प्रडक्टहरू किन चलाउने, के फाइदा हुन्छ भन्नेतिर बैंकहरूको ध्यानै गएन । दस वर्ष भयो होला, विश्व बैंक र आईएमएफ लगायतले नेपालमा आएर उदाहरण दिने गरेका थिए– केन्याको ‘एम पेसा’ भन्ने डिजिटल सेवा (मोबाइल एप) छ । केन्याका सबै मानिसले त्यो एपमार्फत कारोबार गर्छन् ।
केन्यामा सबैभन्दा गरिबदेखि सबैभन्दा धनीसम्मले त्यो एप चलाइरहेका छन् भने नेपालमा किन नल्याएको भनी उनीहरूले धेरै बैंकलाई भन्ने गरेका थिए । हामीले त्यसबारे गहिरो अध्ययन गर्दा के पायौं भने, हामीसँग भएको टेक्नोलोजी र हाम्रा ग्राहकहरूको बुझाइ केन्यालीको भन्दा कम रहेनछ । फरक चाहिँ के रहेछ भने, केन्यामा आपराधिक घटनाहरू धेरै हुँदा रहेछन् । त्यही भएर केन्यालीहरू गोजीमा पैसा बोकेर हिँड्दा रहेनछन् । पैसा देख्नेबित्तिकै चक्कु वा बन्दुक देखाएर लुटपाट गरिने भएकाले उनीहरूले ‘एम पेसामा पैसा’ राख्ने गरेका रहेछन् । अपराधकै कारण ‘एम पेसा’ लोकप्रिय भएको रहेछ ।
तर हाम्रोमा अपराधले हैन, कोभिडले मानिसहरूलाई डिजिटल बैंकिङमा धेरै उत्साहित बनाएको छ । यो महामारीअघि डिजिटल बैंकिङको जुन अवस्था थियो, अहिले त्योभन्दा फरक किसिमले प्रयोगकर्ताहरू बढेका छन् । पहिले जतिसुकै एपहरूको सुविधा दिए पनि ग्राहकहरू किन प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न पछि पर्दैनथे । कतिपय त बैंकसम्म जान्छौं, ब्रान्च म्यानेजरसँग बसेर एक कप चिया खान्छौं र केही समय गफ गरेर फर्कन्छौं भन्नेहरू पनि थिए । तर, अहिले बैंकमा आउनुस् भन्दा पनि उनीहरू आउने अवस्थामा छैनन् । कोभिड सुरु भएसँगै ग्राहकहरूले हामी आफ्ना अफिसमा जान सक्दैनौं र बैंकसम्म पनि आउन सक्दैनौं भन्ने गुनासाहरू गर्न थालेपछि नबिल बैंकले इ–नबिल कर्पोरेट बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । र, यस्तो अभ्यासमा अरू बैंक पनि छन् ।
अहिले समग्रमा डिजिटल बैंकिङ उकालो चढिरहेको छ । डिजिटल बैंकिङ अहिले मूलधारको वित्तीय उपकरणका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरू २ करोडभन्दा बढी छन् । यसमा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्नेहरूको संख्या समावेश छ । बैंकहरूले एटीएम सेवालाई विस्तार गर्दै लगिरहेका छन् । अहिले सबै बैंकका गरेर देशभर ४ हजारभन्दा बढी एटीएम बुथ छ ।
आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकहरूलाई कोभिड महामारीको समयमा सुरक्षित कारोबारको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘इ@नबिल–कर्पोरेट इन्टरनेट बैंकिङ’ सेवा नबिलले सञ्चालनमा ल्याएको छ । इ–नबिल एसएमई मिड कर्पोरेट तथा ठूला कर्पोरेटहरूलाई प्रदान गर्ने इन्टरनेट बैंकिङ सेवा भएकाले नबिल बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरूलाई स्वयम् नै रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कर्पोरेट हेडको दुई–तीन डिजिटल हस्ताक्षर चाहिन्छ । आफ्ना कर्मचारी र भेन्डरहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न पाएपछि यसको यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आयो कि, महामारीका बेला पनि घरमै बसीबसी रकम भुक्तानी गर्ने अवसर दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्न थाले । योसँगै हामीले सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) पनि डिजिटलमार्फत नै खोल्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।
खाता खोल्ने, ऋण आवेदन दिने, भुक्तानी गर्ने, पैसा पठाउने जस्ता बैंकिङ सेवाहरू अहिले घरघरमै उपलब्ध छन् । अहिलेको पुस्ताको प्रविधितिर बढी झुकाव भएका कारण पनि यस्तो सेवा दिएका हौं । अहिलेको पुस्ता प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन थालेकाले बैंकहरूले मागबमोजिम कतिपय प्रडक्ट थपिरहेका छन् । घरमा नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई सिकाउने क्रम पनि बढिरहेको छ । इन्टरनेट र ब्रोडब्यान्ड अनि मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेपछि डिजिटल बैंकिङ पनि गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव के रह्यो भने, कोभिड सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खाता खोल्ने र डिपोजिट गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । तर, बैंकले मात्र डिजिटल फोकस भएर हुँदैन । यसका लागि एउटा इको सिस्टम चाहिन्छ । इको सिस्टममा पहिलो चासो दिनुपर्ने भनेको सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नै हो । उनीहरूले डिजिटल फ्रेन्ड्ली रेगुलेसन र प्रोसेसरहरू ल्याउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक मात्र नभनी किन नेपाल सरकार पनि भन्नुपर्छ भन्दा, यसमा न्यायिक निकायको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । हामीले सबै सिस्टम डिजिटल गर्‍यौं तर केही समस्या आयो, ग्राहकहरू अदालतसम्म जानुपर्‍यो र न्यायाधीशले आवश्यक कागज ल्याउनुस् भन्दा छैन भन्नुपर्‍यो भने कसरी डिजिटल ? बैंकका प्रयोगकर्ताहरू छन्, नियम छ तर भेन्डरहरूकहाँ सेवा उपलब्ध भएन भने पनि समस्या हुन्छ । उपभोक्ताले जहाँ गएर आफ्नो वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ पनि त त्यो चल्नुपर्‍यो नि ! र, अहिले कोभिडका कारण त्यो राम्रो इको सिस्टम बनेको छ । तरकारी, औषधि, तेल र चामल होस् या कुनै पनि सामान चाहियो भने हाम्रा युवाहरूले एपमार्फत भुक्तानी गर्न थालेका छन् ।
कोभिडको बेला सोह्रश्राद्ध कसरी गर्ने ? पण्डितलाई बोलाउँदा भाइरस सर्छ कि भन्ने त्रास भइरहेका बेला युवाहरूले एप निकाले । सोह्रश्राद्ध डिजिटल भयो, दक्षिणा डिजिटलमार्फत नै । दसैं र तिहारको दक्षिणा पनि एपमार्फत नै भुक्तानी भएको देखियो । परम्परागत संस्कृतिमा सबैभन्दा मोडर्न टेक्नोलोजी प्रवेश भयो । यो इको सिस्टम त बैंकले गरेको होइन, समयले माग्यो । हामीले पेमेन्टका लागि बाटो खुला गराएका मात्र हौं । एकचोटि एटीएम चलाएको मान्छे अर्कोपटक बैंकको शाखासम्म चेक लिएर जाँदैन । डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा झनै सहज भएपछि अर्को विकल्प सोच्नैपरेन । अहिले बिजुलीको बिल तिर्नदेखि तरकारी किन्नसम्म डिजिटल पेमेन्ट सुरु भएको छ ।
क्यास–लेस सोसाइटीमा जान असम्भव होला तर लेस क्यास सोसाइटीमा जान हामी चाँडै सक्छौं । धेरै मुलुकमा नगदरहित कारोबार सुरु भइसकेको छ । सानोदेखि ठूलो कारोबारसम्म डिजिटलबाटै हुने गरेको छ । हामीकहाँ अझै डिजिटल प्लेटफर्ममा ठूलो कारोबारका लागि सीमा राखिएको छ । हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यु–२०१९ अनुसार, जापान, अमेरिका, डेनमार्क, बेलायत, नेदरल्यान्ड, नर्वे लगायतमा ९० प्रतिशत डिजिटल र १० प्रतिशत मात्र नगदमा कारोबार हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको समयचक्र माथि होइन, तल जानुपर्छ । तल्लो तहसम्म डिजिटललाई विकास गर्नुपर्छ । गाउँका हाटबजारमा किनबेचसमेत फोनको क्यूआरकोडमार्फत हुन आवश्यक छ । क्रेता र विक्रेता दुवैको पैसा, सुरक्षा र बचतका लागि डिजिटललाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । डिजिटल भनेको एटीएम, कोर बैंकिङ सिस्टम र इन्टरनेट बैकिङ मात्र होइन । हाम्रो सोच नै डिजिटल हुनुपर्‍यो । डिजिटल भर्टिकल बनाइसकेपछि त्यसमा आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला बाहिर आउनुभन्दा भित्र डिजिटल हुनुपर्‍यो ।
कागजको प्रयोग कसरी घटाउने, कागज कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिन्छ र त्यसलाई कसरी डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरौं । बंगलादेश र श्रीलंकासहित विश्वका बैंकहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने हेरौं । छिमेकी मुलुक चीन डिजिटलमा विश्वकै अगुवा भएको छ । हामीले चिनियाँ बैंकबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं । नबिल बैंकले त्यसै गरी सिकिरहेको छ । पैसा सबैसँग छ, नबिलसँग राम्रो टिम छ । ३६ वर्षदेखि काम गरिरहनुभएका साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, नयाँ युवा साथीहरू पनि अहिले आउनुभएको छ । नयाँ र पुराना साथीहरू मिलेर नबिल डिजी बैंकमा जसरी काम भएको छ, यो निकै लोभलाग्दो छ । कोभिडपछि भ्याक्सिनको युग आउँदा भूकम्प भुलेजस्तै कोभिडलाई भुल्ने हो भने हामी फेरि पहिलाकै अवस्थामा पुग्न सक्छौं । यो समय अभ्यस्त हुने हो र हामी डिजिटलमा अभ्यस्त हुनपट्टि लागौं ।
(शाह नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०९:३३